Manao fiarovan-tena ve ny fiarovan-doha aero? - Fiarovan-Doha
Tena > Fiarovan-Doha > Fiarovan-doha fiaramanidina aerodinika - mamaly ireo fanontaniana
Fiarovan-doha fiaramanidina aerodinika - mamaly ireo fanontaniana
Manao fiarovan-tena ve ny fiarovan-doha aero?
Mazava be anaero fiarovan-doha manaohaingana kokoa amin'ny vola azo refesina ianao, saingy tsy hafainganam-pandeha maimaim-poana izany satria ny rivotra mihena dia midika hoe mandoa amin'ny fananganana hafanana ianao. Raha tsy miaina anaty toetrandro mangatsiaka ianao dia mety tsy hanome sosokevitra anao izahayfiarovan-doha aerohampiasaina ho toy ny fonony irery sy isan'andro.
Marina, raha matotra amin'ny mandeha haingana amin'ny bisikiletanao ianao dia azo inoana fa tamin'ny fotoana sasany dia nieritreritra ny hanatsara ny fiarovanao arabe ianao satria manao aroloha arabe aero, na fiarovan-doha fitsapana aza, na angamba ianao nahita olona mitafy izany karazana fiarovan-doha izany ary manontany tena hoe maninona amin'ny lahatsoratra anio aho no handrovitra sy handanjalanja ny lafy tsara sy ny lafy tsaran'ireo fiarovan-doha tsirairay ireo ary ny fomba mety hanasoavany ny mpitaingina azy rehetra ary aza manahy, hataoko amin'ny kely iray mifaninana amin'ny roa mifanohitra, ankehitriny ianao dia mety mieritreritra hoe inona no mahasamihafa ny fiarovan-doha? Fantatrao fa ny teoria dia mahazo tombony kely amin'ny zavatra rehetra ary ireo lalao kely rehetra ireo dia afaka manampy tombony azo. Momba ny fanangonan-karena tombony an-tsokosoko ary izany indrindra no ananantsika eto, tombony an-tsokosoko ihany, inoana fa 20 eo ho eo ny fanoherana ataontsika raha ny bisikileta kosa avy amin'ny bisikileta ary ny 80 ambiny dia avy amintsika ilay mitaingina azy ary hatramin'ny tena ilaina ny lohanay, ny fiarovan-doha mamaky ny rivotra dia mitana andraikitra lehibe dia aleo aloha jerena ny safidy Ka voalohany dia manana fiarovan-doha mahazatra tahaka ity nataoko eto ity ny Metit trenchler dia manana vavahady be dia be. misy rivotra tsara fa ny fiasa sy fampiononana no tena asany ary maivana be izy ireo. Ity dia maivana be eo amin'ny 250 grama, raha ny fiarovan-doha Aerorose dia namboarina haingana ary eto dia manana Manta vaovao avy any Met aho.
Mbola miaro tena ihany izy io ary mbola fiarovan-doha amin'ny bisikileta manana endrika mitovy amin'izany, saingy ho hitanao fa vitsy kokoa ny lavaka satria toa manandrana ny ho aerodynamika kokoa izy ireo ary afaka milanja kely kokoa, na dia maivana aza ity iray ity amin'ny 250 grama fotsiny ary avy eo manana ny fiarovan-doha TT izay zavatra iray hafa tanteraka amin'ny hafainganana amin'ny hafainganana, saingy hafa tanteraka ny endrika ankehitriny, mazàna hitantsika io endrika endrika toy ny ranomaso io amin'ilay hevitra fa ny rambony dia mameno io banga io ao ambadiky ny loha ary eo anelanelan'ny lamosin'ilay mpitaingina, izay mampisosa ny fikorianan'ny rivotra ary mampihena ny tarihiny. Ankehitriny ny rambony dia mety miovaova amin'ny halavany ary hazavaiko kely ny antony taty aoriana, saingy angamba tsikaritrareo fa misy aza ny rivotra kely kokoa ary mety mavesatra kely kokoa izy ireo eo amin'ny 350 ka hatramin'ny 400 grama, izay tena tsia gaga ankehitriny alohan'ny hidirako lavitra any amin'ireo fiarovan-doha ireo. Andao hamoaka sekoly roa amin'ny alàlan'ny fomba mahazatra GTN miaraka amina tokontany kely Tt ary raha ny marina dia te hahalala aho raha tena misy fiovana lehibe eto.
Safidy fohy no nisafidianako, saingy antenaiko fa ampy ny ahafahantsika misintona angona vitsivitsy avy ao. Telo kilometatra izao ny halavany ary tsara ary miloko amin'ny lafiny hafa, toy ny fanaonay mahazatra dia ampiasana amin'ny areti-mifindra mitovy amin'ny hafainganam-pandeha mitovy ny hafainganam-pandehan'ny rivotra sns. Ka aleo aloha mandeha miaraka amin'ny fiarovan-doha mahazatra telo roa iray andao gookay faharoa mihazakazaha ny lesoka apetraho amin'ny aroloha an-dàlana izao dia andao atao izay roa roa avelao haka ny tanjona farany mihazakazaka miaraka amin'ny fiarovan-doha tt andao hanao izay roa roa avelao hanao ny marina tsara raha ny marina dia somary natahotra aho sao tsy hanao izany aho manana zavatra betsaka horesahina eto, saingy misy valiny tsara dia tsara ho anao eto, ka tamin'ny voalohany dia nihazakazaka ara-bakiteny tao anatin'ny segondra vitsy ireo fihazakazahana ireo izay vaovao tsara satria izany no hevitra fa nandeha tamin'ny hafainganana ihany aho , noho izany izao dia tsara ho an'ny fiarovan-doha ihany no fiarovan-doha mahazatra izay manana salan'isa 254 watt ho an'ny s aroloha arabe 249 ary avy eo ampiasaina ho an'ny tt helmet245, izany dia tahiry 9 watts avy amin'ny aroloha mahazatra mankany ny fiarovan-doha thett, izay nahafa-po ahy indrindra, bec fampiasana izay tena misesy ary araho miaraka amin'ny fikarohana marobe hitako, noho izany dia nanana fiakarana lehibe izahay avy amin'ny aroloha an-dàlana mankany amin'ny fiarovan-doha aero ary avy eo mitsambikina kely kokoa avy amin'ny fiarovan-doha amin'ny rivotra mankamin'ny tthelmet ary ny fantatro amin'ny olona tena hendry dia ny arakaraka ny ahatongavantsika haingana, ny tombony bebe kokoa amin'ny aerodynamika sy ny sisin-tany.
Ka mandrosoa, ny fiarovan-doha TT dia haingana kokoa, mihoby tsara ry zalahy manandrana, tsy mino anao aho Avelao aho hisotro kafe ary hanazava bebe kokoa momba ny antony mahatonga ireo fiarovan-doha hafa ireo ho safidy tsara, okay vitany izao? Mazava ho azy, samy manana ny tombony ananany ny tsirairay, fa andao atomboka amin'ny zavatra mety ho hita taratrao amin'ny fitsangatsanganana andiany na ho hitanao eo am-bisikileta amin'ny lalana misy anao. Mety ho iray amin'ireo roa ireo raha mifanohitra amin'ity iray ity. Tsy ny hilazana an'io fa tsy fiarovan-doha mety na safidy tsara izany, ho ahy manokana dia mihevitra fa fiarovan-doha tena milay izy saingy somary matotra ihany, sa tsy izany aloha, andao jerena aloha ny fiarovan-doha mahazatra, izao izany rehetra izany -Vari-lalana sy safidy malaza indrindra noho io antony io, manana rivotra madio tsara izy.
Ka raha miasa mafy ianao na mafana ny andro dia hitazona ny lohanao ho tsara sy mangatsiatsiaka izy ary noho izany dia hihena ihany koa ianao, ary saika natao mba tsy hitanao akory fa eo an-dohanao io, afaka miaina, ary izy maivana ary mahazo aina tokoa ary noho izany antony izany no safidy tena malaza amin'ny fampiofanana araka ny fahitako azy, fa na dia mihazakazaka na mampiofana ao anaty tontolo mafana na be havoana aza aho dia mety ho io no safidiko ho an'ny fiarovan-doha Zahn Aero Road Etsy ankilany, safidy lehibe ho an'ny eo anelanelany koa no lasa malaza. Ny bonus amin'ity dia ny fitafianao azy amin'ny andro rehetra amin'ny herinandro amin'io andro io ary tsy voatery ho tsikaritry ny olona, ​​fa mahazo tombony aerodynamika hitantsika fotsiny ianao ary izany no antony ahitanao ny tombony azo amin'ny bisikileta mitafy ity karazana ity. ny fiarovan-doha amin'ireo sehatra fisaka ireo ho an'ny tombontsoa azo avy amin'ny aerodynamika, lanezy araka ny hitanao ary araka ny efa noresahiko teo aloha dia mazava ho azy fa tsy dia misy rivotra kokoa noho ny fiarovan-doha bisikileta mahazatra aero fa mazava ho azy fa mety tsara amin'ny fitsangatsanganana mangatsiaka kokoa sy mangatsiaka koa Safidy raha tianao ny hanafana ny lohanao ary avy eo ny fiarovan-doha TT dia mazava ho azy fa ny safidy haingana indrindra ho an'ny làlana mety ho an'ny mpamily mety, andao atrehana izany, tsy io no safidinao isan'andro, mety tianao ihany koa ny hanana izany amin'ireo ary tahirizo izany ho an'ny andron'ny hazakazaka. Nahita 9 watt aho tamin'ny spektrum 100 ka hatramin'ny iray hafa ary avy eo 4 watt avy tamin'ny fiarovan-doha aero-ka hatrany amin'ny fiarovan-doha TT, saingy hiovaova arakaraka ny toerana azon'izy ireo idirana izany dia miovaova arakaraka ny toerana azon'izy ireo idirana. ny endrik'izy ireo na ny iray hafa dia mety hianjera amin'ny fiarovan-doha ary mahaliana ny olona maro fa tsy mahita fahasamihafana lehibe eo amin'ny tombotsoan'ny fiarovan-doha amin'ny fiarovan-doha TT noho ny toerana misy azy ireo ary ny mahaliana dia maro amin'ireo atleta matihanina no mifidy antsika. toy ny fiarovan-doha an'habakabaka amin'ny hetsika mafana kokoa toa an'i Kona satria na dia kely kokoa aza ny rivotra entiny noho ny fiarovan-doha mahazatra dia toa kely kokoa noho ny fiarovan-doha TT izy io, manampy azy ireo hihena fotsiny izany ary raha tsy mahazo be ianao amin'ny fanaovana satroka TT tsara, tena tsy dia tsara i Brainer, betsaka ny zavatra tokony horesahina androany ka azafady raha mbola misy fanontaniana hafa, azafady mba ampahafantaro ahy e, tafiditra ao amin'ireo fanehoan-kevitra etsy ambany aho tiako ny manampy sy mamaly anao momba an'io ary eny, aza adino ny manaraka Izahay amin'ny tambajotra sosialy ary zahao ny sasany amin'ireo lahatsoratray hafa, raha tianao ny lahatsoratra androany, omeo azy ny tahaka ary omeo anay ny famandrihana eto ambany
Inona ny fiarovan-doha aerodynamika indrindra?
Ity misy fantina ny tsara indrindrafiarovan-doha aero
Met Blanketfiarovan-doha aero. Vidio izao amin'ny eBay (145,99 $)
Mavic CXR Ultimatefiarovan-doha aero.
Cloudy toy ny saka 352fiarovan-doha aero.
Giro Cinder MIPSfiarovan-doha aero.
Fialam-boly Z1fiarovan-doha aero.
Evade manokanafiarovan-doha aero.
Bell Zephyrfiarovan-doha aero.
Lazer Bulletfiarovan-doha aero.
Mila fiarovan-doha aero ve aho?
Avy amin'ny zavatra niainako manokana dia tiako ny manaofiarovan-doha aeroamin'ny toe-javatra rehetra, indrindra fa rehefa manomboka mandray triathlons maharitra ianao. Eritrereto fotsiny hoe ohatrinona ny fampiofanana azonaoeFAnyAzahahitana watt 15-20 mampiasa fenitrafiarovan-doha!
sakafo ara-pahasalamana tsara
Mampihena ny dragona ve ny fiarovan-doha bisikileta?
Matetika ny mampiasa bisikileta matihanina sy mpihazakazaka sasanyhisarona arolohasatria efa naseho fa aerodynamikacanina fiarovan-dohamamokatra 47% totaldrag fampihenanaampitahaina amin'ny mahazatrafiarovan-doha. Na izany aza, ireo rivotra ireoprévenirfikorianan'ny rivotra misosa nyfiarovan-dohaivelany, mampitombo ny aerodynamikatarihiny.
Vitsy ny fanatanjahan-tena mitsapa ny fetran'ny atleta matihanina toy ny bisikileta. Fandrahonana feno hatezerana. Saingy tsy ny faharetan'ny olombelona amin'ny làlana ihany no manome ny rijan-kevitra hahazoana fahombiazana, fa koa ny faharanitan-tsain'ny olombelona.
Io no bisikileta haingana indrindra eran'izao tontolo izao. Amin'ny fanatanjahantena ambony, ny fahasamihafana misy eo amin'ny fahombiazana sy ny tsy fahombiazana dia matetika no fahasamihafana kely indrindra. Camp base ho an'ny ekipa iray mahomby indrindra amin'ny fanatanjahantena eran-tany.
Ny mpitaingina bisikileta anglisy no nilahatra voalohany tamin'ny medaly medaly tamin'ny lalao olimpika telo farany, ary ekipa iray izay mandresy hatrany. Te ho haingana indrindra eto an-tany izahay, tsy manao an'izany. Te handresy ny Lalao Olaimpika fotsiny isika, te handresy amin'ny fotoana haingana indrindra.
Amin'ny fanatanjahan-tena izay manapa-kevitra ny hazakazaka amin'ny 1/1000 segondra, dia zavatra iray loha no variana amin'i Emily sy ny mpiara-miasa aminy: ny tombony an-tsokosoko. Ny firaka kely iray antsasaky ny iray isan-jato dia hahavita an'io fahasamihafana io amin'io andro io. Asio tsindry.
Ary iray amin'ireo toerana tsara indrindra hahitana an'io lalan-kely io amin'ny bisikileta. Ny lehilahy manan-danja ao amin'ny ekipa amin'izany dia manam-pahaizana momba ny aerodynamika ary injenieran'ny hazakazaka Formula 1 teo aloha. Ny asako dia ny mampiasa teknolojia sy injeniera tsotra amin'ny fomba azoko ampiasaina hanamboarana ny ekipa haingana kokoa.
Profesora amin'ny injeniera ao amin'ny oniversite any Cambridge, Tony Purnell, no namolavola ilay bisikileta T5GB malaza eran-tany miaraka amin'ny mpanamboatra Cérvelo. Amin'ny alàlan'ny fampihenana tanteraka ny drag, nanampy ny ekipa britanika hankafy ny lalao olimpika nahomby indrindra hatrizay. Io no bisikileta haingana indrindra eran'izao tontolo izao.
Ny fomba fananganana ireo sosona fibre karbaona ireo dia mahatonga bisikileta maivana kokoa sy hentitra kokoa nefa tsy manimba ny aerodynamika, ny famolavolana minitra dia miova hatrany amin'ny rojo manapaka ny millisecond manan-danja rehetra amin'ny hery vokarinao dia mandalo ny fifandirana ao amin'ilay rojo very. Raha azonao atao ny mampihena izany fatiantoka izany dia midika fa somary matanjaka kokoa ilay atleta nahatonga ny fahasamihafana rehetra tamin'ny lalao teo amin'ny volafotsy sy ny volamena. Tsy ny bisikileta ihany, izay ahatongavana fahalavorariana aerodynamika tsy an-kijanona, fa koa ilay olona eo amboniny.
Ny toerana tena misy ny mpamily dia afaka manao ny tsy fitoviana rehetra. Mialoha ny fandaharam-potoana, 45 segondra mialoha izy aorian'ny 40 kilometatra. Tamin'ny taona 1996, tompon'andraikitra Olaimpika Chris Boardman dia namaky ny firaketana an'izao tontolo izao adiny iray.
Raha eo amin'ny toeran'ny Superman i Boardman, dia nivelatra teo alohan'ny lohany ny fitaovam-piadiana ho an'ny aerodynamika malefaka kokoa. Amin'ny alàlan'ny fananganana ny lalana ho an'ny toeran'ny olo-malaza sangany. Androany izany lova izany dia mitoetra ao amin'ny Centre-Performance-of-the-art Boardman Performance Center any Evesham, Angletera.
Ny famolavolana bisikileta dia afaka manampy tanteraka, saingy hitantsika fa ny ankamaroan'ny vokatra aerodynamika sy dragis dia avy amin'ilay mpitaingina azy ihany. Mipetraha, lazao amiko bebe kokoa momba ny làlana tiantsika haleha, ny zavatra tadiavintsika, anio, i Jamie dia manampy ny mpandeha bisikileta matihanina Dan Buthor hamantatra ny fihetsika mety indrindra azony ho an'ny hazakazaka hazakazaka ekipa ho avy. Ao amin'ny tionelin'ny rivotra, miady amin'ny hafainganam-pandehan'ny rivotra mihoatra ny 60 km / ora i Dan mba hanahaka ny toetoetran'ny dragona izay hanehoana azy eny an-dalana.
Ny zava-bitany, ary tamin'ny farany ny fahombiazany, dia afaka niankina tamin'ny andiana fiovana saika tsy takatry ny saina tamin'ny toerany tamin'ny bisikileta. Okay Dan, andao hanao ny fanovana voalohany nataontsika, afaka manao izany vetivety isika. Andao afindra ny tanantsika, azafady.
Amin'ny alalantsika no mandroso kely ny tanany ary manamboatra. Raha milimetatra fotsiny ny elanelan'izy ireo, dia mihodina efa ho antsasaky ny segondra isan-kilometatra i Dan. Izahay dia mitondra rakitsoratra manerantany eto, mendrika ny hananana.
Tongava amin'ny andron'ny hazakazaka, ny fiovana an-kolaka toa ireny dia mety hitondra tombony lehibe ho an'ny ekipan'i Dan. Raha izaho manokana dia eo amin'ny 4/10 eo ho eo aho no haingana, raha vao anjarako izao, ary raha ho an'ny rehetra ao amin'ny ekipa izany fandresena izany dia segondra roa na roa na roa segondra haingana kokoa isika amin'ny ankapobeny. Ny lazan'ny bisikileta dia nosimbain'ny doping.
Saingy ny fikatsahany tombony an-tsokosoko ara-dalàna dia mbola mamaritra ny hafainganam-pandeha ho an'ny taranja maro hafa. Ireo mpitaingina bisikileta tsara indrindra eran-tany dia miatrika fifaninanana miha-mitombo avy amin'ireo mpifaninana izay mailaka mianatra haingana manavao; ny fikatsahana tombony an-tsokosoko dia vao mainka mihakely.
Mafana ve ny aero?
Toy ny fitsipika,aerolalanafiarovan-dohadia kelymafananoho ny fenitrafiarovan-doha. Raha mijaly amin'ny amafanaloha rehefa mitaingina na raha tenamafanaandro ianao mety te-hitarika mazava, fa mety hahita be dia be ianaoaerolalanafiarovan-dohaany ivelany amin'izao andro izao dia mahazo aina amin'ny ankamaroan'ny toe-javatra.
Tena haingana kokoa ve ny bisikileta aero?
Miaraka amin'nybisikileta aero, afaka mandeha tsotra izao ianaoHaingankaingananoho ianao amin'ny tsy-bisikileta aero. Jiro kokoabisikiletadia azo antokaHaingankaingananoho ny mavesatra kokoa, fa amin'ny làlana iray toa ny Trek 100, izay tsy misy fiakarana goavana, dia tsara indrindra ny mandeha miaraka amin'nybisikileta aero, na dia manampy lanja kely aza.dimy ambin'ny folo. 2020.
Tsara ve ny satroka PMT?
nytsarakalitaofiarovan-dohatsy ny fiarovana tena ilaina ihany fa ny hatsarana ihany koa.Fiarovan-doha PMTmampiasa Polycarbonate nohamafisina sy Polystyrene nanitatra hanome anao fiarovana avo lenta matevina mavesatra amin'ny fiantraikany. Izy io koa dia mampiasa buckles an-jorony ergonomic mba hisorohana ny famatorana ny sofinao.
Misoroka ratra amin'ny ati-doha ve ny fiarovan-doha?
Nasehon'ny fanadihadiana fa ny fanaovana afiarovan-dohamampihena ny loza mety hitranga aminaoratra amin'ny ati-dohaary ny fahafatesana satria mandritra ny fianjerana na fifandonana, ny ankamaroan'ny angovo misy akony dia entin'nyfiarovan-doha, fa tsy ny anaolohanySYatidoha.
Hatraiza ny heriny handravana ny fiarovan-doha amin'ny bisikileta?
Ny vaky salanisaheryhita fa 140 lbf.
Inona ny fiarovan-doha aero haingana indrindra?
Namboarina tao amin'ny tionelin'izy ireo manokana, mitondra ny lohateny hoe Win Tunnel, nilaza manokana fa ity nyfiarovan-doha haingana indrindraefa nosedraina izy ireo.03/17/2021
Fa maninona no mila fiarovan-doha fiaramanidina aerodynamika?
Ny fiarovan-doha tena aerodynamika dia manapaka ny rivotra amin'ny fihoarana kely indrindra ary mamonjy anao angovo. Fitsipika ankavanana: arakaraky ny maha-aerodynamika anao no mahakely ny rivotra entiny. Raha miakatra havoana ianao ary mitaingina havoana mihodinkodina tsy misy ahiahy amin'ny fitsitsiana angovo, dia mety tsy mila fiarovan-doha aerodynamika ianao.
Iza no fiarovan-doha bisikileta aero tsara indrindra?
Mahaleo tena foana ny lahatsoratranay. Ny fiarovan-dohan'ny bisikileta Aero dia marimaritra iraisana amin'ny fiarovan-doha mahazatra sy TT ary tokony hanolotra tombony aero sy rivotra madio. Matt Baird dia manandrana ny 7 amin'ireo tsara indrindra
Ahoana ny fomba hampihenana ny dragona aerodynamika ao amin'ny fiarovan-doha?
Torohevitra tsara iray hafa hampihenana ny fitarihanao aerodynamika ao anaty fiarovan-dohanao dia ny mandeha fiarovan-doha aero lava volo. Ity karazana fiarovan-doha aerodynamika ity dia azo antoka fa hanome anao hafainganana haingana kokoa amin'ny bisikileta raha ampitahaina amin'ny karazana fiarovan-doha amin'ny bisikileta.